Manokana fanamoriana, insulator mitambatra, mihemotra tariby - Histe
Torohevitra momba ny asa
Kabinetra fitsinjaram-pahefana ambany
Fitaovana fantsom-panafana hafanana
Fitaovana tariby mangatsiaka mangatsiaka
Dropout Fuse Series
Manokana ny andian-dahatsoratra
Surge Arrester Series
Fantsona bara fitobiana hafanana mifintina
Silavo Rubber Transformer Bushing
Shijiazhuang Histe Electric Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny Shijiazhuang Lvdao Development Zone izay akaikin'ny Qingdao-Yinchuan Super Highway sy ny làlambe am-bisikileta manodidina. Ny tanànan'i Shijiazhuang dia ny fihaonan'ny lalamby Beijing-Guangzhou, Shijiazhuang-Taiyuan, lalamby Shijiazhuang-Dezhou. Tena mety tokoa ny fitaterana azy. Ny orinasa dia naorina tamin'ny taona 1991. Izy io dia iray amin'ireo orinasa voalohany namokatra switch mitokana any Shina.
Niorina tamin'ny 2004
Traikefa 29 taona
Doctorat / bakalorea mihoatra ny 7
vokatra fanao isan-taona 100000+ set
Powert avo lenta ...
Ny herinaratra avo lenta miakatra amin'ny herinaratra arrester Zinc oxide compound sheath non-clearance surge arrester dia ampiasaina hiarovana ny fitaovana elektrika mifandimby (AC) mifandimby misy herinaratra mifandraika amin'ny herinaratra be loatra. Ny fananana miaro azy dia tsara ary ny antipollution miavaka ary koa ny habeny dia kely ary ny maivana. Satria ny rakotra dia vita amin'ny akora biolojika toy ny silipo vita amin'ny silika ary EP (epoxide) dia afaka misoroka karazana lozam-pifamoivoizana lehibe, ho an'ny ...
jereo ny vokatra
High Quality Volt ...
Fanamafisam-peo avo lenta avo lenta avo lenta feno amin'ny famaritana, ny masontsivana teknika avo lenta dia lava. Fanampiny, sakany feno amin'ny fampiharana, azo ampiasaina amin'ny fisehosehoana avo izy io. Ny fomba fametrahana dia malefaka. Altitude: 1000m ~ 3000m mari-pana momba ny tontolo iainana: -30 ka hatramin'ny 40 ℃ (-40 ka hatramin'ny 40 ℃ amin'ny faritra mangatsiaka manokana) Hafainganan'ny rivotra tsy mihoatra ny 700pa (Mitovy amin'ny 34m / s) Hamafin'ny horohoron-tany tsy mihoatra ny 8 degre. Ny hatevin'ny rakotra ranomandry dia tsy mihoatra ny toerana misy mm 10mm tokony tsy hisy inflamma ...
Fihenjanana avo lenta P ...
Insulator fampiatoana avo lenta ny fihenan'ny alim-bolo dia matetika vita amin'ny faritra misisika (toy ny porsera, faritra fitaratra) ary kojakoja vy (toy ny tongotra vy, satroka vy, flanges, sns.) rafitra herinaratra. Amin'ny ankapobeny dia an'ny insulateur ivelany sy ny asa eo ambanin'ny toe-piainana izy ireo.
Dropout Cutout High Vo ...
Dropout Cutout High Voltage Compound Fuse Dropout fuse dia misy mpanohana insulator sy fuse Tube. Ny fifandraisana statika dia raikitra amin'ny lafiny roa amin'ny fanamafisana ny insulator ary ny fifandraisana mifindra dia apetraka amin'ny faran'ny fantsona fuse roa. Ny fuse fuse dia misy ny fantsom-pamonoana arc, fantsom-pamokarana phenolic ivelany na fantsom-baravarankely epoxy. Raha te hifandray amin'ny mpamatsy tsipika fizarana izy io dia miaro indrindra ny mpanova na ny tsipika avy amin'ny faritra fohy sy ny be loatra, ary ny ony tsy miakatra. W ...
Hafanana mitete ...
Heat Shrinkable Protective Cover Bus bar joint Box MPH busbar junction box dia namboarina tamin'ny polyadifin irradiation crosslinked hot shrinkage busbar izay namboarin'ny die.Widely ampiasaina amin'ny trafo, arrester, switch any ivelany ary fitaovana mandeha amin'ny herinaratra hafa.Izany dia manana ireto toetra manaraka ireto: 1. harafesin'ny bus amin'ny asidra, alkaly, sira ary zavatra simika hafa. 2. Esory ny lesoka fohy ataon'ny totozy, bibilava ary biby kely hafa. 3. Fisorohana ny ratra tsy nahy vokatry ny banga mivantana ...
Ny haben'ny tsenan'ny indostrian'ny mpanova dia mihoatra ny 100 miliara amin'ny taona 2020
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny fitakiana tsena fampitaovana herinaratra sy fanapariahana herinaratra manerantany dia mitombo amin'ny ankapobeny. Ny fanitarana ny toby famokarana herinaratra, ny fitomboan'ny harinkarena ary ny fangatahana herinaratra any amin'ireo firenena vao misondrotra dia hitondra ny tsena mpanova herinaratra manerantany manomboka amin'ny $ 10,3 miliara amin'ny taona 2013 ka hatramin'ny $ 1 ...
Maninona no mifidy US
Fampanantenan'ny serivisy: Mampanantena izahay fa ny tahan'ny vokatra efa zatra dia 100%, ary ny vanim-potoana fiantohana dia 3 taona. Manaraka ny fifanarahana ary manatanteraka am-pahatsorana ny fe-potoana nifanarahana: fandefasana ara-potoana, fampandrenesana amin'ny fandefasana ny entana amin'ny ankilany. ; Miorina mafy ...
Adress: No 6, Minxin Road, faritra indostrialy lvdao, Shijiazhuang, Faritanin'i Hebei, Sina
Antsoy izahay izao:
(86) 13932102798, (86) 13832127565
© Copyright - 2019-2020: Voatahiry ny Zo rehetra.